Galmudug oo bilowday qaadista Canshuuraha | Wardoon
Home Somali News Galmudug oo bilowday qaadista Canshuuraha
Galmudug oo bilowday qaadista Canshuuraha
Maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabi doonaan qaadista Canshuuraha maamulka Galmudug si loo dardargaliyo howlaha maamulka oo bilihii ugu dambeeyay ku jiray gaabis.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Galmudug Saciid Shire Shirwac ayaa warbaahinta u sheegay in Madaxweyne Xaaf in uu Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ka waday maalmihii lasoo dhaafay Abaabul ku aadan in dadka ay bixiyaan Canshuuraha.
Wasiirka ayaa sheegay in Magaalada Gaalkacyo laga bilaabi doono qaadista Canshuuraha , Maadaama maamulka uu dejiyay qorshaha qaadista Canshuuraha oo sare loogu qaadaayo adeegyadda muhiimka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Galmudug ayaa ku sugan Magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale lagu waddaa in uu taggo Magaalooyinka kale oo ka mid ah Galmudug si uu uga dhaadhiciyo bixinta Canshuuraha si uu maamulku u helo dhaqaalle uu ugu adeego bulshadda.
Previous articleDAAWO:- Gaas oo maanta Puntland kaguuray
Next articleDhisme ku dumay Suuriya oo dad badani ay ku dhinteen
Warbixin:- Madaxweyne Dani Oo Ka hadlwy Sababta uu oga qeyb galiwayay...
Xildhibanada Hawiye oo mooshin ugudbiyey BF